कोहलपुर महोत्सवमा गायिकाले कसरी हगांमा मच्याइन् ? – Nepali Audio Video
कोहलपुर महोत्सवमा गायिकाले कसरी हगांमा मच्याइन् ?
आफुलाई रक गायिका भनेर चिनाउने सरस्वती लामा सामाजिक संजालमा बढी चर्चित छन् । गायकीको कारणले होइन, अश्लिल हर्कतले । उनका उच्छृंखल स्टेज प्रस्तुतीको भिडियो र अन्र्तवार्ताहरु युट्युवमा छ्यापछ्याप्ती छन् । लेख्नै नमिल्ने शब्दावली प्रयोग गरेर युट्युवमा कुराकानी गर्ने र गराउने क्रमसँगै सरस्वती लामा चर्चामा आएकी हुन् । पछिल्लो समय उनी मेला, महोत्सवहरुमा ‘आकर्षण’ बन्न थालेकी छिन् । त्यस्ता कार्यक्रममा उनी उदाङ्गो पहिरनमा प्रस्तुत भएर अराजक शैलीमा गीत गाउने गर्छिन् ।